1 taona 6 volana lasa izay #921 by moisinho
Eu gostaria muito de ter um pacote de aeronaves da TAM (LATAM) para Fsx, raha misy ny pacotes dia misy ny Ultimate Pack 777-200ER, izay tena sarobidy indrindra amin'ny TAM-baiboly (B777-200ER). Ny fampidirana am-bava an-tserasera dia tsy misy dikany, mbola mitohy ho antsika izany! Obrigado.
Manana takelaka fiaramanidina avy any TAM (LATAM) koa aho Fsx, iray amin'ireo fonosana tsara indrindra ao amin'ny Ultimate Pack 777-200ER, tena te hanana tontolon'ny TAM amin'ity fiaramanidina ity (B777-200ER). Ny hatsaran'ny fanampian'ny hafa eto dia tsy mampino, mitazona izany hatrany! Misaotra anao.
1 taona 6 volana lasa izay #922 by Dariussssss
Voalohany indrindra, miarahaba an'i Rikoooo. Tena mahafinaritra tokoa ny mandre fa tianao ilay poketra. Mampalahelo fa tsy manao an'ireny tafika ireny isika. Midika izany fa tsy afaka manampy na manova zavatra ao anatin'izany isika. Raha misy ny fahadisoana dia azontsika atao ny manamboatra azy ireo, saingy momba izany.
Faharoa ... Tsy maintsy mampitandrina anao aho, ity no Forum an'ny Anglisy, ka aza adika amin'ny fiteny hafa.
Miverena indray ary maka fotoana tsara.
Fotoana mamorona pejy: 0.192 segondra